Dhaawacyo ay ku jiraan Injineeradii Turkiga oo saakay loo qaaday Ankara – Hornafrik Media Network
Waxaa saakay magaalada Ankara ee dalka Turkiga loo qaaday dhaawacyada 9 qof oo ay ku jiraan 3-dii Injineer ee Turkiga uga dhaawacmay weerarkii is-miidaamiinta ahaa ee sabtidii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Afgooye.
Diyaarad Militeri oo ay leedahay dowladda Turkiga ayaa dhaawacyadaas saakay looga qaaday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale dhaawacyada la qaaday ayaa waxaa ka mid ah taliye ku xigeenka ciidanka Haramcad ee gobolka Banaadir, askar iyo dad rayid ah, kuwaas oo ku dhaawacmay qaraxii Sabtidii la soo dhaafay ka dhacay Bood-boodka Afgooye.
Dhaawacyadaan ayaan tan iyo Sabtidii lagu dabiibayey isbitaalka Erdogan, Ex Digfeer oo uu shalay ku booqday Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Dowladda Turkiga oo ka hadashay weerarkaas ayaa sheegtay in uusan saameyn doonin howlaha dib u dhiska ah ee ay ka wado gudaha Soomaaliya.
Dowladda federaalka ayaa sidoo kale hadda bilowday qorshe cusub oo lagu sugayo ammaanka shaqaalaha dhisaya wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo ay dhiseyso shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa shalay la geeyey wadadaas, kuwaas oo dhagax ku gooyey meesha uu marayo dhismaha ku socda laamigaas.
Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ka dhanka ah shaqaalaha iyo Injineerada Turkiga ah ee dhisamaha ka wada jidka xiriiriya Muqdisho iyo Afgooye, waxaana weerarkaan ka horreeyey kii Ex-Control Afgooye ee dadka badan lagu laayey.
Boosaaso: Puntland oo ka warbixisay qarax ay fashilisay